सेयर बजारको उतारचढाव स्वाभाविक हो – Rajdhani Daily
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
पछिल्लो सययमा नेपालको सेयर कारोबारमा उतारचढाव आइरहेको छ । सेयर कारोबारमा उतारचढाव देखिनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । यद्यपि, लामो समयसम्म यसरी निरन्तर बजार प्रभावित बन्दा त्यसले लगानीकर्तामा भने नैराश्यता उत्पन्न गराएको समेत पाइन्छ । अहिलेको सेयर बजार, यसको वास्तविकता, बजारले लिने गति र सेयर बजारको सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले चाल्ने कदमलगायतका विषयमा केन्द्रित रही नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीस“ग राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सेयर बजारको प्रवृत्तिलाई बोर्डले कसरी हेरेको छ ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्छ । मुख्य ृपमा बजारमा देखिएका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट सियाल्ने र त्यसका लागि समयसापेक्ष रूपमा नीतिगत सुधारका कदमहरू चाल्ने कार्य हमीले गर्दै आइरहेका छौं । बजार विकासका कार्यक्रमहरूमा हामी लागिरहेका पनि छौं । यतिबेला धितोपत्र बजार मात्र नभई कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई आएको छ । त्यसको ऐन आइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउने कार्यमा पनि अहिले बोर्ड लागिरहेको छ ।
ऐन आएपछि त्यसअनुसार नियमावली हामीले बनाउने हो । कमोडिटी बजारमा के कस्ता व्यवसायी हुनुपर्छ, उनीहरूका लागि के कस्ता मापदण्ड आवश्यक पर्छ, लाइसेन्स अब कसलाई के आधारमा दिने भन्ने हामी तय गर्छौं । अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन । हामी अहिले कमोडिटी बजारसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणमा छौं । यसलाई विस्तार विकास गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ ।
अहिले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरू पनि छन् । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार उनीहरूले पनि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा गरेपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले पनि लाइसेन्स पाउन सक्छन् । तर अहिले नै उनीहरूले नै पाउने भन्नेचाहिँ छैन । यो करार ऐनअनुसार कारोबार हुने हो । करारअनुसार काम गर्दै जानुपर्छ । अब लाइसेन्स लिँदा नयाँ ऐनअनुसार नै आउनुपर्छ । यसमा पुराना व्यवसायी र नयाँ जो सुकै पनि पर्न सक्छ । त्यसका लागि ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नु पहिलो दायित्व हो ।
पुँजी बजारमा लामो समयदेखि निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । यसलाई बोर्डले कसरी हेरेको छ ?
अहिले बजारमा सेयरको सप्लाइ बढेको देखिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय सस्थाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हकप्रद, बोनस आदि तरिकाबाट उनीहरूबाट बजारमा सेयर प्रवाह बढ्यो । मर्जर प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । वित्तीय विवरण आउँदा लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेअनुसार नआएको भन्ने पनि महसुस भएको छ । अपेक्षाअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुँदैन कि भन्ने पनि छ, लगानीकर्तामा । नयाँ सरकार कहिले आउँछ, कस्तो आउँछ भने एउटा मानसिकता पनि छ । यस्तै, तरलताको समस्या पनि देखिएको छ । बजारमा यसले पनि बजार घट्नमा बल पु¥याएको देखिन्छ । बजार घट्नुका यिनै विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् । हामीकहाँ अनावश्यक हल्ला पनि भइरहन्छन् । यो वा त्यो कारणले बजार घट्यो भनेर हल्ला बढी गरिन्छ ।
अहिले पुँजी बजार खस्कनुको मुख्य कारण चाहिँ के देखिएको छ ?
पुँजी बजार भनेको घटबढ भई नै रहन्छ । यसको स्वभाव नै यस्तै हो । यो लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टका आधारमा हुने हो । कहिले बजार घट्छ र कहिले बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । पहिला र अहिले बजारको टे«न्ड नै फरक छ । लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार कम्पनीहरूले प्रतिफल दिन सकेन भने बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । फेरि कम्पनीको अवस्था राम्रो भए बजार माथि जान सक्छ ।
बजार सुधारको नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ?
बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई मजबुत बढाउन पुँजी बढाउन आवश्यक छ भनेर बोर्डले पहिले नै भनेको हो । अहिले त्यसअनुसार काम भइरहेको छ । सर्टटर्ममा कसले कसैलाई अप्ठ्यारो पारे पनि त्यो लङ टर्मका लागि राम्रो हुन्छ । पुँजीबजारबाट समग्रमा लगानीकर्ताले १२ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल पाएको देखिन्छ । तर यो सबैको हकमा लागू हुँदैन ।
निर्वाचन नतिजाले पनि बजारमा प्रभाव पारेको हो ?
पुँजी बजार कुनैबेला बढ्छ, कुनैबेला घट्छ । यो भइरहने एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो । फलानो पार्टीको सरकार बन्ने भएकाले बजार घट्यो भन्नेखालका हल्लाहरू पनि सुनिकएको छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । किनभने अब जुन पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउँदै छन्, ती पार्टीले नेपालमा पहिलोपटक सरकार बनाउन लागेका होइनन् । यसअघि पनि सरकारको नेतृत्व गरेको दल वा दलका नेताकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो । त्यसैले चुनावी परिणामका कारण बजार घटेको होइन ।
तर बजार घट्नुमा विभिन्न कारण छन् । जस्तो ः सेयरको आपूर्ति बढिरहेको छ, त्यसको अनुपातमा माग बढेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि भयो । त्यसमा बोनस सेयर र हकप्रदको अंश धेरै छ । यसले पनि आपूर्ति बढाउन सहयोग पुग्यो । अहिले बजारमा तरलता अभावको विषय पनि आइरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढेको छ । अर्काे कुरा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदन आएको छ । त्यो प्रतिवेदन लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेभन्दा नराम्रो भएको उनीहरूको अनुभूति हुन सक्छ । पुँजी बढेअनुसार प्रतिफल पाइँदैन कि भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई लागेको हुन सक्छ । यस्ता कारणहरूले बजारमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।
पुँजी बजारको कारोबारमा हुने लगानीको छानबिनले तीव्रता पाएपछि बजार घट्न थालेको भनिन्छ नि ?
बजार घट्नुका त्यो मुख्य कारण होइन । अहिले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार कसैले गरेको छ भने त्यो जानकारी बोर्डलाई प्राप्त हुन्छ । यसअघि लगानीलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्ने कि भन्ने पनि थियो । तर अहिले त्यसो गरिएको छैन । एकथरी लगानीकर्ता हल्ला गरेर बजार बढाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि छन् । हामीकहाँ संस्थागत लगानीकर्ता कम छन् । त्यसैले रिटेल इन्भेस्टर बढी हुँदा हल्ला बढी हुन्छ । यसको पछाडि दैडनुहुँदैन । नियम कानुनअनुसार कारोबार गर्दा कोही डराउनुपर्दैन ।
नया“ सरकार कहिले आउ“छ, कस्तो आउ“छ भन्नेस“गै अहिले तरलता समस्या देखिएको छ
सेयर बजारमा कहिले बजार घट्छ र कहिले बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था हु“दैन
पु“जी बढेअनुसार प्रतिफल पाइ“दैन कि भन्ने विषयबाट लगानीकर्तालाई बाहिर आउन नसक्दा बजारमा नकारात्मक असर
रिटेल इन्भेस्टर बढी हु“दा हल्ला बढी हुने र त्यसको पछि दौडि“दा लगानी डुब्न सक्छ
हल्लाकै भरमा बजार बढ्छ भनेर लगानी गर्नुहु“दैन
सेय बजार सुधार गर्न संस्थागत लगानीकर्ता आवश्यक पर्छ
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा ल्याउनुपर्छ
आफ्नो पु“जी र ऋण दुवै मिलाएर लगानी गर्नेलाई बजार केही घट्दैमा असर पर्दैन
नेप्सेले अनलाइन ट्रेडिº सुरु गरेपछि त्यसको प्रभाव हेर्नुपर्छ
बजार घट्नुमा नियमनकारी निकायको कमजोरी त छैन ?
नियामकले एउटा नीति ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनमा जाने न हो । बजारलाई विभिन्न सेन्टिमेन्टहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो बजारमा अझै पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरू छैनन् । खासगरी ‘रिटेल इन्भेस्टर’हरू छन् । रिटेल इन्भेस्टर बढी भएको बजारमा धेरै कुरा बुझेर लगानी गरिएको हुँदैन ।
पहिलाको तुलनामा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’को लेबल बढेको छ तर पर्याप्त छैन । यस्तो बजारमा आउने विभिन्न प्रकारका हल्लाहरूलाई मान्छेहरूले सत्य हो कि होइन भनेर नबुझीकन कहिलेकाहीँ ‘प्यानिक’ हुने अवस्था आउँछ । सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारका समाचारहरू आउँछन् । राम्ररी नबुझीकन नै समाचार लेख्ने पनि गरिन्छ । नियामककै कमजोरीका कारण बजार घटेको भन्न मिल्दैन ।
बजारको सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
बजार सुधारका लागि विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये पहिलो भनेको बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लागेको धेरै नै समय भयो । हामी एकप्रकारले लागिरहेका हुन्छौं, त्यहीबेलामा बजार अर्काे बाटोमा पुगिसकेको पनि हुन सक्छ । फेरि धितोपत्र बोर्डले आइज भनेर संस्थागत लगानीकर्ता आउने कुरा पनि होइन । कसैले फलानाको सरकार आउँदै छ, त्यसैले बजार घट्छ भनेको आधारमा आत्तिने वा कुनै सञ्चारमाध्यममा बजार घट्छ भनेर समाचार आउँदैमा हतारिएर बेच्ने गर्नुभएन । यस्तै, हल्लाकै भरमा बजार बढ्छ भनेर लगानी पनि गर्नुहँुदैन ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई हामीले झकझक्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो झकझक्याउने काममा हामी अझै त्यति सफल भएनौं भन्नुपर्ने भयो । हामीले हाम्रो पाटोबाट सहजीकरण गरेका कारण केही म्युचुअल फन्डहरू आएका छन् । तरपनि उनीहरू प्राविधिक रूपमा संस्थागत लगानीकर्ता नै चाहिँ होइन । केही हदसम्मको भूमिका उनीहरूले निर्वाह गरिरहेका छन् । संस्थाहरूलाई नै चाँडोभन्दा चाँडो बजारमा ल्याउनुपर्छ ।
लगानीकर्ता डराउनैपर्ने अवस्था हो त अहिले ?
त्यस्तो अवस्था छैन, जस्तो कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदन अपेक्षाभन्दा नराम्रो आयो होला तर त्यसको ‘रिकभर’ अर्काे त्रैमासमा हुन सक्छ । केही लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर बजारमा लगानी गरेको पनि देखिन्छ ।
बजार घट्नेबित्तिकै बैंकहरूले मार्जिन कल गर्छन् । अनि त्यसको असर पनि बजारमा देखिन थाल्छ । आÏनो पुँजी र ऋण दुवै मिलाएर लगानी गरिएको छ भने त्यस्ता लगानीकर्तालाई बजार केही घट्दैमा असर पर्दैन । तर ऋणबाट मात्र लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई बजार घट्दा अझ समस्या पर्छ । यी सबै असर बजारमा देखिन थालेको हो ।
अहिलेको अवस्थामा बोर्डले लगानीकर्ताको हितमा के गर्न सक्छ ?
बजारमा विभिन्न हल्ला आउँछन् । त्यस्ता हल्लाको पछि लागेर डिसिजन नगर्नुस् । तथ्य कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि नयाँ सरकार बन्दै छ । स्थायी सरकार आउँछ । बजारलाई स्थायित्व दिने प्रकारका केही नीतिगत निर्णयहरू होलान् । यस्ता निर्णयले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले नै आत्तिएर फलानाको सरकारले आयो रे, अब यस्तो हुन्छ भन्ने प्रकारका हल्लाको पछाडि लाग्नुहुँदैन । केही नराम्रा समाचारहरू पनि आउन सक्छन् । त्यस्ता केही नकारात्मक समाचार पढेकै भरमा आत्तिनु भएन ।
अर्काे त्रैमासको प्रतिवेदन आउने बेला हुन लाग्यो । त्यो प्रतिवेदन पनि हेर्नुस् भन्ने नै हो हामीले भन्ने कुरा । पहिलो कुरा त अहिले बजारमा जे भइरहेको छ, त्यो पहिरो नै होइन । यसलाई पहिरो हो भन्ने हो यस्तै पहिरो आएर बजार माथि पनि पु¥याउँछ ।
नियामकले नियामकीय सहयोग गर्ने नै हो । हामीले नेप्सेलाई अनलाइन ट्रेडिङ चाँडो सुरु गर भनिरहेका छौं । ब्रोकरका शाखालाई देशका विभिन्न स्थानमा कसरी लैजाने भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।
बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका पनि छौं । बैंकको विषयमा हामीले मात्रै भनेर भएन । राष्ट्र बैंकको विषय पनि आउँछ । राष्ट्र बैंकको नीति नियमले पनि त्यसो गर्न दिनुप¥यो । उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । म्युचुअल फन्डहरू आइरहेका छन् । हामीले यसलाई बजारलाई स्थायित्व दिन सक्ने Ïयाक्टर बन्न सक्छ भनेर अझै पनि प्रमोट गरिरहेका छौं । हामीले आÏनो तर्फबाट गर्न सक्ने कामहरू गरिरहेका छौं ।
हामीले बजारलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका हुन्छौं । आवश्यक पर्दा के गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ, अध्ययन गरेर सक्ने जति गर्छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने बजारलाई बजारकै रूपमा छोड्नुपर्छ । कसैले म्यानुपुलेट गरेर बजार घटाएको छ भने हामीले हस्तक्षेप गरेर त्यसो गर्न नदिने हो । स्वाभाविक हो भने नियामकले रोक्न खोजेर पनि रोक्न सकिँदैन । काहीँ नीतिगत समस्या छ भने त्यसलाई जहिले पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजारमा नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने प्रयास के भइरहेको छ ?
यस विषयमा विभिन्न पहल भइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि पुँजी बजारमा भिœयाउन हामीले अध्ययन गरेका थियौं । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन आउने भन्ने कुरा आएपछि त्यसमा भएका व्यवस्थाको कारण हामीले धेरै पहल गर्नुनपर्ने भन्ने कुरा आयो । तर ऐन केही ढिला हुने जस्तो देखिएको छ । हामी अहिले गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा ल्याउनका लागि गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा थप पहल गर्न लागेका छौं ।
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल ग¥यौं । हामीले रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा आउने बाटो खोल्यौं । तर उहाँहरू आइरहनुभएको छैन । महासंघका प्रतिनिधिले हामीसँग भन्नुभएअनुसार निजी क्षेत्रको विभिन्न फोरमहरूमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा ल्याउन छलफलहरू भइरहेको छ । त्यसबाहेक बजारको पहुँच बढाउने विषयमा पनि पहल भइरहेका छन् ।
अहिले लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नै आएको हो त ?
बजारलाई बुझ्ने आ आफ्नै तरिका हुन्छ । सुजबुझपूर्ण तरिकाले सेयर किन्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य उतारचढाव देखिँदैमा आत्तिने र मात्तिने गर्नुहुँदैन किनकि सेयर बजारको स्वभाव नै घटबढ भइरहने किसिमको हुन्छ । विगतमा नेप्से परिसूचक २ सय ९२ बिन्दुमा पुगेको पनि हामीले देखेकै हो । त्यही बिन्दुबाट उठेर बजार १ हजार ८ सयभन्दा माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको पनि हामीले नै देखेको हो ।
कुनैबेला बजार घट्छ, केही समयपछि फेरि बढ्छ । त्यसैले हल्लाको पछाडि लाग्ने होइन । आफूले बुझेर लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भने गर्ने र बेच्दा फाइदा हुन्छ भने बेच्ने हो । कसैले फलानाको सरकार आउँदै छ त्यसैले बजार घट्छ भनेको आधारमा आत्तिने वा कुनै सञ्चारमाध्यममा बजार घट्छ भनेर समाचार आउँदैमा हतारिएर बेच्ने गर्नुभएन । यस्तै हल्लाकै भरमा बजार बढ्छ भनेर लगानी पनि गर्नुहुँदैन । पहिला आफूले बुझ्नुस् अनि निर्णय गर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने कुरो के भयो ?
धितोपत्र बोर्डबाट अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज खोल्न ठीक छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । हामीले यो कुरा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । उसले यस विषयमा आफ्नो राय दिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्छ । हामीले आफैं यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था रहेको भए पनि बोर्डभन्दा माथिल्लो निकायसँगै परामर्श गरेर निर्णय लिने उद्देश्यले हमीले अर्थ मन्त्रालयमा यो लेखिपठाएका हौं । नयाँ खोल्ने भन्दैमा अहिलेकै अवस्थामा अर्को खोल्न चाँही हुँदैन । यसलाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउनु पर्दछ ।